Iprosesa ye-ultrasonic i-UIS250L isetshenziselwa ukusheshisa kwezinqubo ze-sieving ngenye indlela noma ezihambisana nama-vibrators aphansi wevrivini ephansi. Ikakhulukazi uma kwenzeka ama-powders amahle kakhulu ama-ultrasound ngokuvamile okuwukuphela kwendlela yokusiza inqubo yokusikeka.
I-Hielscher Ultrasonics ithuthukise ubuchwepheshe obuyingqayizivele emhlabeni wonke ikakhulukazi ezithakazelisayo ezivamile ze-laboratory ring sieves (ngokusho kwe-DIN ISO 3310/1 noma i-ASTM E 11-95) enezinamba zama 200mm noma 8 intshi. I-sonotrode yendandatho ehambisana nesihlungo ijabule yiprosesa ye-ultrasonic UIS250L. I-sonotrode yendandatho (i-RIS) idlulisela ukukhipha ngokufometha kwe-sieve kuya endaweni yokuhlola. Ngosizo lwezinsimbi zokugubha ama-sieves angomakhelwane nawo ayajabula. Ngokuphambene nezinqubo ze-ultrasonic sieving ezaziwa kuze kube manje, lapho isi-sieve ngasinye sidinga ukukhushulwa kwayo kwe-ultrasonic, lesi yisixazululo esingabizi kakhulu futhi esinamandla.
Enye inzuzo yalesi simiso sokuthakazelisa ukuthi i-transducer ikhona ngaphandle kwezinto okumele zenziwe. Lolu buchwepheshe lungasetshenziselwa ukusikwa okumile noma okumanzi, kanye nokuhlanza ama-sieves. Izingxenye ze-ultrasonic zingabuyekezwa kabusha emibhoshongweni ekhona kakade futhi ingasetshenziswa ngokuhambisana nama-vibrators. Kulesi simo ububanzi bokulethwa buhlanganisa kuphela iprosesa ye-ultrasonic i-UIS250L ne-sonotrode yendandatho, ezobe ifakwe emagcekeni avamile we-laboratory izindlu zabakhiqizi abaningi.
Isethi yokufinyelela (SZS) iyadingeka embhoshongweni ophelele we-sieving. Isethi iqukethe ipulatifomu eyisisekelo, imigoqo yokubambisana enezintuthwane ezisheshayo ngokushesha, isamukeli esingaphansi nesembozo esiphezulu.
I-timer T1 ivumela ukusebenza uhlelo lwe-sieving okwesikhathi esithile esichazwe isikhathi.
I-Ultrasonic Processor UIS250L
for sieving ultrasonic, 250 Watts, ultrasonic imvamisa 24kHz, othomathikhi imvamisa ukuguqula uhlelo, amplitude adjustable kusuka 20 kuya 100%, impulse adjustable kusuka 0 kuya 100%, omile ukusebenza evikelwe, transducer IP40 ibanga
ukuze kusetshenziswe izikrini ezijwayelekile ze-laboratory (ngokusho kwe-DIN ISO 3310/1), ububanzi be-200mm, ukuphakama kwe-35mm
ukuze kusetshenziswe izikrini ezijwayelekile ze-laboratory (ngokusho kwe-ASTM E 11-95), ububanzi buka-203,5mm (8 intshi), ukuphakama kwe-35mm
Isikhungo sokufinyelela SZS200
ama-sieve nokugqoka i-sonotrode ububanzi obuyi-Ø200mm noma i-Ø203,5mm (Ø8,0 "), ehlanganisa isiteji, imigoqo yokubambisana enezintambo eziphuthumayo, i-receiver ephansi nesembozo esiphezulu